Uthi akuthi diki ngokufela komkakhe 'emanyaleni' - Ilanga News
Home Izindaba Uthi akuthi diki ngokufela komkakhe ’emanyaleni’
Uthi akuthi diki ngokufela komkakhe ’emanyaleni’
Kuthiwa inkosikazi idutshulwe yiphoyisa eliyisihlobo somyeni ebijola nalo
UMUFI uNkk Bongekile Mnguni wa-KwaXaba, eGamalakhe, ogqoklozwe yiphoyisa ebeliyishende lakhe ngoMgqibelo ntambama nalo laqede lazibulala.
uTHI akuthi diki owesilisa waKwaXaba, ePort Shepstone, inkosikazi yakhe ebulawe ngoMgqibelo ntambama, idutshulwa yiphoyisa ebijola nalo. kusolwa ukuthi ibingasafuni ukwehlukanisa nomyeni wayo yize ishende beselimxoshile umkalo, liphendlela yena indawo.
ILANGA lithole ukuthi uNkk Bongekile Mnguni (38), uphume kwakhe ngabo-17:30 ntambama watshela umyeni wakhe, uMnu Jimmy Mnguni, ukuthi usaya kubo. Ngemuva kwemizuzu ewu-30 ephumile, kuthiwa kungene intombazanyana eneminyaka ewu-7 ubudala ikhihla isililo, ithi “uNkanyiso usebulele umama”.
UNkanyiso obeshiwo yingane, nguConstable Nkanyiso Ngcobo, obeyiphoyisa esiteshini sama-phoyisa khona eGamalakhe, naye ozingqokloze ngenhlamvu wafa.
Ethintwa yiLANGA uMnu Mngu-ni, akabange elokhu ebika imbiba ebika ibuzi, uthe impela kunje-ngoba kubikwa ukuthi inkosikazi yakhe ibulawe yisoka layo. Uthe ubudlelwano bomkakhe noConstable Ngcobo bebaziwa ngisho nayingane encane endaweni.
Uthi njengoba umkakhe efele ehlazweni nje, akudikizi nqulu kuyena ngoba phela ufele ezi-ndleleni zakhe. Utshele ILANGA ukuthi ngokuthola kwakhe, umka-khe noConstable Ngcobo baqale ukuncinzana ngasekuqaleni ko-nyaka, njengoba ethi kukhona ngisho ubufakazi bemiqhafazo abutholile.
“Kwangimangalisa lokhu ngoba phela uNkanyiso ungumshana wami futhi besijwayelene kakhulu ngisho nanenkosikazi yakhe. Ngisho kunemisebenzi besidla esithebeni esisodwa. Kwathi uma ngithola ngokungidla kwakhe izi-thende, saxabana. Ngaqala ukuzwa ngalolu daba ngixoxelwa yinkosikazi yakhe abeseyixoshile, wayinika nencwadi yesehlukaniso,” kusho yena.
Uqhuba athi wahlala phansi nomkakhe embuza ngendaba yokujola nomshana wakhe, kodwa waphika walala ngomhlane.
“Ngamkhombisa ubufakazi ebesenginabo ngaleso sikhathi, wave-le wathula. Kunomunye wabangani bami engimbizile, sahlala pha-nsi naye umkami sayikhuluma le ndaba, waqhubeka wayiphika. ngabe sengiyambuza futhi ukuthi njengoba inkosikazi yeshende lakhe seyinikezwe nencwadi ze-sehlukaniso naye okuthiwa unayo, ufuna sihlukane yini?
“Wathi akazi nokuthi zithathwaphi izincwadi zokwehlukanisa, usazimisele ngokuba nami,” esho.
Uthi wamcela umkakhe abesebeshade iminyaka engaphezu kwewu-10 ukuba balungise izi-nto ngoba ubezifela ngaye.
“Ngingumuntu osekhulile futhi benginethemba lokuthi uzokwazi ukudlula kule nto, nokuthi kusho ukuthi walingeka nje. Ngale kwa-lokho, bengimthanda kakhulu umkami futhi ngingazimisele ngo-kuhlukana naye.
“Besingahlukanake ukube yena ubefuna ukufaka isehlukaniso. Kuyimanje nje njengoba esho-nile, kangizimisele nangokuphi-nde ngiganwe,” kusho yena.
Uthi udaba lwabo belunzima kakhulu ngoba umkakhe ubengasenawo umndeni, esesele nodadewabo omncane kanti naye akanawo umndeni, ngakho beyingekho indlela yokuhlanganisa imindeni ikhulunywe kahle le ndaba.
Utshele ILANGA ukuthi bane-ngane eyodwa okuyiyona lena ebone lesi sigameko.
“Ingane ithi ngesikhathi belwa nonina, (ungcobo) uzamile ukuyibamba yadlubulundela yabaleka,” esho. Uthi inkosikazi yakhe ishaywe ngezinhlamvu ezintathu esiphongweni, uConstable Ngco-bo wazidubula enhlafunweni.
“Uthe unethemba lokuthi uma amaphoyisa esebuyise umakhalekhukhwini womkakhe, uzokwazi ukuthola ukuthi empeleni bebebangani lena eholele ekutheni uConstable Ngcobo aze athathe isinqumo sokuthi bafe bobabili.
“Ngiyasola ukuthi ubekhala ngokuthi yena usechithe umkakhe wasala yedwa kodwa lona owami usahleli emzini wakhe.”
Uqhube wathi uzimisele ngokutholela indodakazi yabo usizo lokwelulekwa ngokwengqondo ngoba iphazamisekile ngemuva kwalesi sigameko.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, usiqinisekisile lesi siga-meko, wathi kuvulwe icala loku-bulala nedokodo ngomuntu ozibulele.
Previous articleUthi uhlamukwe wumndeni ‘ngokulaxaza’ oFakazi uTshatha
Next articleWINA! Easter Data & Shopping Competition